Dheecaanka Ku Jira Hooyada Uurka Leh & Shaqooyinka uu Qabto | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ciise Cabdullaahi — May 13, 2019
Dheecaanka Kujira Hooyada Uurka Leh. - Ciise Cabdullaahi, 'waa sheybaariste iyo qoraa ka tirsan TukeSomalism.
Waa nooc ka mid ah dheecaannada ku jira dumarka gaar ahaan marka ay uur leedahay hooyada, dheecaankaan wuxuu gaar u yahay dumarka uur ka leh, dheecaankaan wuxuu ku jiraa inta u dhexeeysa uur jiifta iyo xuubabka daboola, xuubka daboola waxa loo yaqaanaa amniotic cavity.
Dheecaankaan wuxuu ka kooban yahay 98% biyo halka 2% uu ka kooban yahay waxyaabo solid ah sida creatinine, urea, uric acid, protein, glucose, hormone, enzymes, electrolytes iyo antibody, antibody wuxuu difaac u yahay cunuga ku jira caloosha hooyada.
Caadi ahaan inta laga rabo dheecaankaan in uu ku jiro uurka hooyada waa 600 ilaa iyo 800ml, wuxuu siyaadaa marka ay hooyada uur ka leh ay gaarto bilaha ugu dambeeya ama ilaa ay ka dhasho marka ay dhasho kadib waxaa hoos u dhacaayo dheecaankaan ilaa ay hooyada uga soo laabadto sideedi hore.
Laakin bilaha ugu horeeya ee hooyada uur-ka leh dheecaanka ku jira waxa lagu qiyaasaa ilaa iyo 35ml, muddo seddax bilood kadib dheecaankaan wuxuu ku siyaadaa hooyada uur ka leh sababtoo ah dheecaankaan intiisa ugu badan wuxuu ka yimaadaa cunuga caloosha ku jira kaadidiisa iyo hab dhiska sambabada dheecaanka ku jira.
Dheecaankaan waxaa ku dhaca is badal waa marka uu kusoo darsamo cunuga caloosha ku jira kaadidiisa sababtoo ah biyaha ugu badan wuxuu ka yimaadaa cunuga sidaasi darteed waxa badanaayo cukanaanta (concentration-ka) creatinine-ta urea, uric acid-ka sidoo kale waxa hoos u dhacaayo protein-ka iyo glucose-ka ku jiray dheecaanka.
Dheecaankaan shaqooyinka uu qabto waxa kamid ah:
Dheecaankaan wuxuu difaac u yahay cunuga ku jira caloosha hooyada.
Dheecaankaan wuxuu ka qayb qaadtaa koritaanka cunuga caloosha ku jira.
Dheecaankaan wuxuu isku dheelitiraa heer kulka cunuga ku jira caloosha hooyada.
Dheecaankaan wuxuu kale oo ka qayb qaadtaa in uu cunuga ku dhex neefsado hooyada caloosheeda.
Dheecaankaan wuxuu ka qayb qaadtaa in uu cunuga ku dhex socdo macnaha dhaq-dhaqaaq ku dhex sameeyo, waxay kaloo ka qayb qaadtaa koritaanka lafaha cunuga iyo murqihiisa.
Dheecaankaan haddii uu ku siyaado caloosha hooyada uurka leh dhexdeeda waxa loo yaqaanaa polyhdra-amnious. Waxyaabaha inta badan sababa waxa ka mid ah maternal diabetes waa sokorta ku dhacda hooyada uurka leh waxaa kale oo keeni kara dhiigga lagu shubbo hooyada macnaha in ay isqaadanin labada dhiig taasi waxa inta badan ka dhasha cuduro halis ah oo ku dhaca dhalaanka ama cunuga ku dhex nool hooyada caloosheeda, cuduradaas waxa ka mid ah,
hydropis fetals, hemolytic disease of newborn, iyo sidoo kale waxa jira cudur kale oo ku dhaca dhalaanka sida neutral tube defects, waxaa kale oo keeni kara caabuqa ku dhaca hooyada marka ay uurka leedahay.
Haddii uu ku yaraado hooyada uurka leh dheecaankaan loo yaqaano amniotic fluid waxa loo yaqaanaa oilgohydra-amnious waxaa sababa in ay dhibaato ka jirto mandheerta (placental problems), in uu dilaaco xuubka ku dahaaran dheecaanka haddii ay hooyada sokor qabto (diabetes) iyo daawooyinka qaar sida daawooyinka ka samaysan hoormoonada.
Haemolytic disease of the newborn:- Waa xaalad sababta burburka ku yimaada unugyada cas cas ee dhiigga ee ilmaha markaas dhacsha, waxaa dhaliya jeermis la deris kaga yimaada hooyada dhiigeeda kaasoo usoo mara mandheerta waqtiga ay dhalanayaan ilmaha gaar ahaan marka hooyada iyo ilmaha nooca dhiiggooda kala duwan yahay.
Waa xaallad halis u ah oo sababi karta cudurada dhiig yarida ilmaha, wadnaha in uu istaago ama islamarkaa ay ilmaha soo baxaan geeriyooda.
Haddii uu jeermis la deriska gaaray uu yahay mid yar waxa dhici karta in ilmaha ay ka kacaan dhibaatooyinkaan, laakin haddii ay yihiin mid dacar la socota waxay sababtaa in burburka dhiigga uu dhaliyo cudurka cagaarshowga (indha caseeye) taasoo u baahnaaneysa in dhiigga ilmaha ku jira la badello oo mid kale oo fiican lagu shubo.
Waxa looga hortigi karaa in dhiigga hooyada la baaro nooca uu yahay iyo haddii ay jiri karaan jeermis ku jira dhiigga hooyada inta ay ilmaha uurka ku jiraan, laakin waqtiyadaan dambe aad ayaa loogu hortagaa cudurada noocaan ah haddii xitaa ilmaha ay soo hallaabaan ayadoon la ogeen dhiiggooda nooca uu yahay waxaa hooyada lagu duraa daawo ka hortagta dhibaatooyinka ku hara ilmo galeenkeeda iyo in ay dhiigga ku dhashaan jeermis la deriska.
Haddii hooyada iyo ilmaha nooca dhiiggoodu uu kala duwan yahay cirbidaas ayaa lagu duraa hooyada si ay uga badbaado dhibaatooyinka dhiigga ilmaha waxa laga yaabaa inuu noqdo mid dhib u keena uurka dambe ee hooyada yeelato.
Waa xaallad aad halis u ah oo ilmaha ay ku dhashaan jirkooda oo biyo ka buuxa aad ayey halis u tahay waxayna sababtaa dhimasho, waxyaabo badan ayaa dhaliya xaalladaan mida ugu horeeysa ee la ogyahay waa dhiig yarida ka timaada burburka unugyada cas cas ee dhiigga, ciladaha lagu dhasho oo ah wadnaha, kellida iyo sambabada oo shaqadooda yareeya waxaa loo maleeyaa in ay sababaan arrintaan. Waxaa badanaa ilmaha lagu shubaa dhiig inta ay caloosha ku jiraan taas ayaa loo maleeynaa in ay ka hor istaagi karto ama hoos u dhigta geerida ka dhalan karta.
Waa jirrooyin isku jir ah oo cilad korida jirka quseeysa taasoo ah in uur jiifta caloosha ku jirto gabto in ay si caadi ahaan u korraan gaar ahaan waxa gaba shaqadooda in ay korraan xuubka maskaxda iyo laf dhabarta waxa dhallata tubbo isku xirta maskaxda iyo laf-dhabarta oo aan korin sidoo kale xuubka daboola lafaha ricirka oo aan awoodin in ay isa soo gaaraan taasoo dhalisa cuuryaanimo caqli daro leh iyo maskaxda shaqadeeda oo aan fiicnayn.
Waxa kale oo jirta cilad gaarta xuubabka maskaxda daboola taasoo sababta xaallad halis ah oo u sahasha maskaxda in ay jeermisyo galaan sidaa daraadeed waxa qasab ah in qaliin deg-deg ah lagu sameeyo si loo saxo xuubka maskaxda dabooli lahaa, ilmaha xaalkaan ku dhasha aad ayey u dhibtoodaan oo cuuryaanimo iyo caqli daro isugu tagtaa.
Tags: Dheecaanka Kujira Hooyada Uurka Leh
Next post Calanka Soomaaliyeed Cunsuriyad Ma Yaqaano Cidna Gooni Uma Laha...
Previous post Sidee Loo Baara Borotiinka Kujira Dhiigga?